Izindaba - Ungakhetha kanjani isixubho
Okokuqala, lapho uthenga inkomishi yokugeza umlomo, udinga ukunaka ukwakheka okuningiliziwe kokusebenza kwebhulashi lamazinyo, okuchazwe kulezi zinyathelo ezintathu ezilandelayo.
Okokuqala, sidinga ukunaka ukwakheka kwebhulashi lamazinyo, njengokwakheka okumise amagagasi, okulingana kangcono umlomo womlomo futhi okungahlanza amazinyo kangcono.
Isinyathelo sesibili ikakhulukazi ukwelashwa kwezinwele ezithambile kwebhulashi lamazinyo, njengezinwele eziqonde kakhulu ezithambile, ezingavikela kangcono izinyo ngalinye ukunciphisa umphumela wokuzala kwamagciwane.
Isinyathelo sesithathu sidinga ukunakwa emininingwaneni yokuphathwa kwebhulashi lamazinyo, njengokuthi ukuvulwa kweminwe nge-ergonomic, nokuthi umbala webhulashi lamazinyo ugcwele futhi uyakhanya.
Esinyathelweni esilandelayo, sidinga ukunaka izidingo zebhulashi lamazinyo, njengokuthi liyibhrashi lamazinyo elithambile, ngabe ikhanda lebhulashi liphephile futhi lihlangabezana nezidingo zebanga lokudla, nokuthi ngabe ukupakisha kwenhlanzeko kuqinisekisiwe yini. Ngasikhathi sinye, udinga ukunaka izihlakala zamabhulashi wamazinyo, njengokuthi ukwelashwa okucijile kungakunciphisa ngempumelelo yini ukucasuka kwezinsini futhi kufinyelele umphumela wokugcwaliseka okuguqukayo komlomo womlomo, nokuthi ngabe ngemuva kwekhanda le-brush futhi inomsebenzi wokuhlanza. Kuyadingeka futhi ukunaka imininingwane yomkhiqizo webhulashi lamazinyo, njengezinto ezibonakalayo, umbala, ukusebenza kahle, ikhwalithi yama-bristles, usayizi, njll ukuqinisekisa umphumela wokuhlangenwe nakho kokusebenzisa.
Ekugcineni, kunezitayela eziningi zombala zamabhulashi wamazinyo. Lapho ukhetha ibhulashi lamazinyo, kufanele ucabangele ukukhetha elilodwa ngokuya ngemibala yakho oyithandayo kanye nezitayela ozithandayo, futhi ekugcineni ukhethe ibhulashi lamazinyo olithandayo.